Dadka reer Noorweey oo badi doonaya in lamnuuco indho shareerka dumarka muslimiinta xirtaan | Somaliska
Dadka reer Noorweey oo badi doonaya in lamnuuco indho shareerka dumarka muslimiinta xirtaan
Ma ahan oo keliya dadka reer Noorweey iyo dadyowga kale ee dunid galbeedka ee doonaya in lamamnuuco xirashada indho shareerka ama niqaabta. Balse waa fikrado ay ka dhasheen ka dib arrimo is biirsaday oo xagga amaanka saameeyn ku yeeshay.
Afti ay sameeysay hey’ado lugu magacaabo IPSOS, ayaa daaha ka rogtay in 75% dadka dalkaasi doonayaan in la mamnuuco niqaabka. Tan oo macnaheeda noqoneysa in afartii qof sadex ka mid ah doonayaan mamnuucista indho shareerkaasi. Haweeeneyda lugu magacaabo Kari Volgt waxaa ay dhinaceeda tilmaantay in arrintaani aan noqon karin arrin wel wel ku rida dadka, maxaa yeelay beey tiri xirashada niqaabta dunida muslinka oo dhan ma wada xirtaan marka loo eego dadyow kooban. Islamarkasina ay dalal ay ka mid yihiin Masar, Turkiga iyo dalal kale oo ku yaala Eeshiya in aan laga ogoleyn xirashada niqaabka. Waxeey xxustay oo kale in haddii laga dhigo arrin weyn mamnuucideeda ayba u gogol xaari karto in ay soo baxaan dadyow kale oo ku dhiiradda waa sida ay hadalka u dhigtay e.
Ugu dambeyntiina arrimahan ayaa sabab u ah baa la oran karaa, weeraro iyo qaraxyo badan oo qaaradan Yurub ka dhacay kuwaas oo isbadalo lama fiaan ah ku keenay. Arrintan ayaa sidoo kale loo sababeeynayaa guushii lama filaanka aheyd ee ku guuleestay ninka naceybka u haya muslimiinta ee Donald Trump.